BanaadirSC oo meel iska saartay Feero+Sawirro
Tuesday, December 18th, 2018 - 21:53:25
Friday November 10, 2017 - 08:10:40 in Wararka by Kubad Bile
Kooxda Kubada Koleyga Banaadir SC ayaa garaacday kooxda Feero si ay usoo tiigsato kaalinta saddexaad eek ala horeynta Horyaalka.
Kulankan oo ay labada koox ku loolameen tiisiga kaalinta saddexaad ee horyaalka ayay labada koox soo bandhigeen ciyaar cajiib waxayna 10-ka daqiiqo ee ugu horeysa ciyarta ku kala baxeen 12-11 oo Banadir SC ku horkaceyso.
Xiddigaha Banaadir ayaa 10-ka labaad lasoo baxay ciyaar awood ku dheehan tahay waxaana qeyb tan lagu kala nastay 20-12 oo ay Banaadir gacanta sare ku leedahay, waxaana qeybta hore lagu kala nastay 32-23 oo Wiilasha Banaadir ku hogaaminayaan.
Marki laysku soo laabtay qeybta labaad 10-ka saddexaad Banaadir ayaa hogaankeeda xafidatay waxaana laku kala baxay 14-10. Taaso ka dhigan 47-33.
Kooxda Feero oo todobaadki hore wacdaro kusoo dhigtay Plasma oo 11 dhibcood ka sareysa kadibna daqiiqadi gudahooda hogaanka kala wareegtay kadibna guusha haleeshay ayaa mrkale sameysay isku day la mid ah waxayna 10-ka u dambeeyay saddex jeer dhalyeen saddexleey ( Three Point) .
waxaana Qatar iyo wel wel ay lasoo daristay Banaadir waxaase weeraro degdega uga jawaabay laacibkooda Asad Cali Maxamed waxayna qeybta afaraad ku idlaatay 14-11 oo ay Feero gacanta sare ku leedaahay, basle natiijada guud ee ciyaarta waxay kusoo idlaatay 57- 47 oo ay guusha ku raacday kooxda BanaadirSC.
Asad Cali Maxamed ayaa noqday dhaliyaha kulanka waxuuna saxiixay 18 dhibcood.